अभिनेत्री कंगनाका आँखा नै रसाउने अदालतको प्रारम्भिक फैसलामा के छ ? « हाम्रो ईकोनोमी
बलिउड अभिनेत्री कंगना राणावतले आफ्नो आँखा रसाएको बताएकी छिन् । मुम्बई उच्च अदालतले बिहीबार मुम्बई नगर निगम (बीएमसी) को बिरूद्ध कंगना राणावतको आवेदनको सुनुवाई गर्यो । कंगनाले आफ्नो अफिस मणिकर्णिका फिल्म्समा तोडमोडको बिरूद्ध याचिका दायर गरेकी थिइन् ।
अदालतले सुनवाईको क्रममा भन्यो कि नष्ट पारिएको सम्पत्ति यस्तै छोड्न मिल्दैन । यसको भोली सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइको क्रममा बीएमसीको आलोचना गर्दै अदालतले भन्यो, ‘तपाईं धेरै छिटो हुनुहुन्छ, त्यसकारण तपाईंलाई किन धेरै समय चाहियो ?
यस मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश एसजे कठवालला र न्यायाधीश आरआई छागलाको पीठले भन्यो, ‘तिमी (बीएमसी) ले मनसूनको समयमा कारबाही गर्यौ । यस्तो अवस्थामा, थप सुनुवाई स्थगित गर्न सकिदैन । जब कार्यवाही गर्नेबारे कुरा गरिएको थियो, तपाईंले धेरै गति देखाउनुभयो ।
जब यो जवाफको कुरा आउँछ, सुस्त देखाइदै छ । कसैको घर नष्ट गरिएको छ । हामी त्यस संरचनालाई वर्षाको अवस्थामा त्यस्तै रहन दिन सक्दैनौं । यस याचिकाकर्ताका वकिलले आफ्नो मुद्दा भोलि (१५ सेप्टेम्बर) बाट ​​पेश गर्न सक्दछन् ।’
अदालतको यस्तो फैसलापछि कंगनाले ट्वीट गरेर आफ्नो आँखामा आँशु आएको बताएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन, ‘माननीय उच्च अदालत, मेरो आँखामा आँसु छ । मेरो घर मुम्बईको वर्षामा भत्कदैँछ । तपाईंले मेरो भत्किँएको घरको बारेमा यति धेरै सोच्नुभयो जुन मेरो लागि पर्याप्त छ ।
मेरो घाउलाई निको पार्नुभएकोमा धन्यवाद । मैले हराएको सबै कुरा फिर्ता पाए ।’ गत ९ सेप्टेम्बरमा उनको कार्यालय भत्काइएको थियो । कंगनाको सम्पत्ति अवैध निर्माणको रूपमा नष्ट पारिएको हो । यस पछि, कंगनाले क्षतिपूर्ति पाउन बिएमसीबिरूद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । कंगनाले भारु २ करोड क्षतिपुर्ति माग गरेकी छिन् ।
भारतको एक अस्पतालमा आगलागी हुँदा अस्पतालमा सेवारत दुई नर्ससहित कम्तीमा १६ कोभिड-१९
पूर्वरानी कोमल शाहको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर
कोरोना संक्रमित भएर नर्भिक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचाररत पूर्वरानी कोमल शाहलाई प्लाज्मा
इजरायलमा भागदौड मच्चिँदा ४४ जनाको मृत्यु
उत्तर पूर्वी इजरायलमा एक धार्मिक समारोहका क्रममा भागदौड मच्चिँदा कम्तिमा ४४ जनाको
भारतमा कोरोनाको महामारी दिनदिनै भयावह बन्दै गएको छ । प्रत्येक दिन